विहान नुहाउनु ठीक कि बेलुका? - Saptakoshionline
विहान नुहाउनु ठीक कि बेलुका?
प्रकाशित मिति: आइतबार, भाद्र ०७, २०७७ समय: ६:४२:५९
हामी सबैको आ-आफ्नै बानी र रुची हुन्छ। अनि कसैले अन्यथा भन्यो भन्दै हाम्रो बानी सजिलैसित हट्दैन पनि! मानिस हुनुको यो एउटा विशेष गुण हो कि, कसैले पनि उसको स्वतन्त्रता छिन्न सक्दैन। तर स्वस्थ जीवन जिउने एउटा नियम हुन्छ, पद्दती हुन्छ। त्यस नियमको पालना गर्ने नगर्ने स्वयं व्यक्तिकै इच्छा र चाहनाको कुरा हुन्छ।
बानी भनौँ या बाध्यता, हामी आफ्नो शरीरलाई बाहिरबाट स्वच्छ र सफा राख्नको लागि नुहाउनु आवश्यक हुन्छ। तर कुरा आउँछ उचित समयको! कुन बेला नुहाउनु उचित हुन्छ- विहान या बेलुका?
तथापी, यदि तपाईँलाई चाँडै निन्द्रा लाग्दैन र अबेरसम्म पनि आँखा चिम्लिन मान्दैन भने साँझको बेला नुहाउनु सही हुन्छ। यो सबै शरीरको तापक्रमले गर्दा भएको हो। मनतातो पानीले नुहाउँदा शरीरको तापक्रम अलिकति बढ्छ र नुहाएर शरीर सुकिसकेपछि तापक्रम घट्दै जान्छ। “यसरी शरीरको तापक्रम एक्कासी घटेपछि शरीरमा ‘कोर्टिसोल हरमोन’ (शरीरलाई जगाइराख्ने हरमोन) को मात्रा घट्दै जान्छ र सजिलै निन्द्रा लगाउन मद्दत गर्दछ।”, डा. शेली भन्छिन्।
“तर, विचार पुर्याउनुपर्छ अधिक गर्मीको बेला”- शेलीले सुझाव दिँदै भन्छिन्। गर्मीको बेला दिनभरी हाम्रो शरीर सामान्यभन्दा अधिक तातेको हुन्छ। यो तापक्रम सजिलै घट्नेवाला पनि हुँदैन। यसरी तातेको शरीरमा साँझको बेला चिसो पानीले भिजायो भने अब त्यहाँ शरीरको तापक्रममा असन्तुलन हुन आउँछ। मतलब शरीरको आफ्नो वास्तविक तापक्रमभन्दा पनि कम हुन जान्छ। जसले गर्दा आलश्य बनाउने, टाउको दुखाउने, दिउँसोको बेला सामान्यभन्दा बढि नै गर्मी भएको महशुस हुने, शरीरमा पानीको मात्रा घटेर जाने जस्ता समस्या उत्पन्न हुन सक्छन्। यसरी गर्मीको बेला साँझ नुहाउँदा शरीरको रक्तचापमा पनि असन्तुलन आउने डा. शेली बताउँछिन्।